Ahoana ny fomba hamehezana sary | Androidsis
Ahoana ny fomba hanomezana mari-drano sary amin'ny Android
Amin'ity lahatsoratra vaovao ity izay manampy amin'ny alàlan'ny horonantsary feno an'ny fandraisam-peonay manokana, hampiseho sy hanolotra rindranasa maimaimpoana ho an'ireo terminal Android izahay, ho ahy iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny sehatra misy azy, izay hahafahantsika miditra amin'ny tsindry vitsivitsy monja, asio mari-drano amin'ireo sary avy amin'ny terminal Android misy antsika.
Te hampiditra an'ity lahatsoratra ity ao amin'ny fizarana fampiharana tsy maintsy ananana amin'ny Takelaka Android, na dia mazava ho azy aza, ny fampiharana dia miasa tanteraka amin'ny karazana terminal Android, na Tablet, Smartphone na Phablet izay misy kinova Android 2.2 na ambony kokoa ny rafitra fandidiana finday Google.
Ny fampiharana apetraka dia azo jerena mivantana ao amin'ny Google Play Store, fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android, mamaly ny anaran'ny Maimaimpoana Photo Watermark ary ho azonao atao ny misintona azy amin'ny fipihana ny rohy izay hanomezanay anao kely eto ambany.
1 Inona no atolotry ny Watermark Photo Free ho antsika?
2 Watermark Photo Free endri-javatra
3 Sintomy ny sary Watermark maimaim-poana amin'ny Google Play Store
Inona no atolotry ny Watermark Photo Free ho antsika?
Maimaimpoana Photo Watermark Hanamora ny asan'ny sary mari-drano avy amin'ny fampiononana atolotry ny terminal Android anay sy ny efijery mikasika azy ireo. Avy amin'ity rindranasa maimaimpoana ity dia afaka misafidy sary iray manokana ho mari-drano, sary efa voafaritra mialoha amin'ny fampiharana na ny daty ankehitriny aza.
Avy amin'ny fiononana amin'ny fisian'ny efijery mikasika, azontsika atao ny manitsy ny mari-drano voafantina, na amin'ny habeny na amin'ny toerana misy azy, amin'ny alàlan'ny famindrana azy fotsiny amin'ilay efijery mankany amin'ny toerana marina tiantsika hisehoana na manaova pin mba hanao zezika hanitsiana ny haben'ny mari-drano voalaza.
Watermark Photo Free endri-javatra
Anisan'ireo fampiasa na safidy omen'ny Watermark Photo Free antsika, azontsika atao ny manasongadina ireto toetra manaraka ireto:
Tena mora ampiasaina interface.
Mety hampiasa ny sarintsika manokana na hisafidy modely maromaro izay ampidirina maimaimpoana amin'ny fampiharana
Kitiho raha hanao zoom mba hanitsiana ny haben'ny mari-drano
Misafidiana ary solafaka amin'ny rantsan-tànanao mba hametrahana ny mari-drano amin'ny toerana irina ao amin'ny sary.
Mety hizarana ny sary voahodina ao amin'ny tambajotra sosialinay, WhatsApp, Gmail, sns, sns.
Safidy hitahiry mivantana ny sary namboarina tao amin'ny fitahirizam-bokatra Android antsika.
Sintomy ny sary Watermark maimaim-poana amin'ny Google Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hanomezana mari-drano sary amin'ny Android
Safedownloadapps, ilay dokambarotra manelingelina manafika ny finday avo lenta sy ny takelaka
Ny Xiaomi Mi 4C dia efa ofisialy ary 205 dolara fotsiny